बसन्तको पुस्तकमा २०७२ को घटना – Rajdhani Daily
बसन्तको पुस्तकमा २०७२ को घटना
२०७२ सालको राजनीतिक परिवेश, नाकाबान्दी, मधेस आन्दोलन, नयाँ संविधान घोषणा जस्ता विविध प्रसँगलाई समेटेर पत्रकार बसन्त बस्नेतले नयाँ पुस्तक ‘७२ को विस्मय’ पाठकमाझ ल्याएका छन् ।
पूर्व राष्टपति डा. रामवरण यादव, राष्टिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपाका नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, राष्टिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी र लेखक बस्नेतले संयुक्त रुपमा राजधानीमा यो पुस्तक विमोचन गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्टपति डा. यादवले लेखक बस्नेतको यस पुस्तकमा तथ्यगत विषय प्रशस्त रहेकोले यसबाट देश र मधेस बुझ्न उपयोगी हुने बताए । उनले फरक प्रसंगमा सबैको सहमतिमा नेपालको संविधान निर्माण भएको स्मरण गराए । संविधान निर्माणका केही विधि र प्रक्रिया आफूलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा समेत मधेसलगायत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरेको स्मरण उनले गराए ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता राष्टिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पुस्तकले ७२ सालमा घटेका घटना र विषयलाई लेखकले तटस्थत रुपमा यो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेको बताए । सोधअनुसन्धान गरेर पुस्तक तयार पारेको, मधेस आन्दोलनका समयमा घटनालाई यथार्थपूर्ण किसिमले प्रस्तुत गरिएको पनि उनको जिकिर गरे । मधेसमा भएको भेदभावको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र त्यसलाई पुस्तकले उजागर गरेको अध्यक्ष ठाकुरको भनाई थियो ।
यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले लेखकले जोखिमयुक्त गहन र वर्जित विषयमा पुस्तक लेखेको बताए । लेखकले पुस्तकमा मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन एवम् मुस्लिमहरुका विषयलाई समेत समेटेको भनाई भट्टराईले राखे । किताब पठनीय रहेको र धेरै तथ्यहरु यहाँ समेटिएको उनले बताए ।
नेकपाका नेता तथा पूर्वसभामुख नेम्वाङले मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र भूकम्पजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पुस्तक केन्द्रित रहेको छ भने । पुस्तकमा संविधान, नाकाबन्दीका विषयमा उठेका अनेक शंकाउपशंका र मधेस आन्दोलका सूक्ष्म विषयलाई रोचक किसिमले प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । लेखकले भूकम्प, नाकाबन्दी, संविधान र मधेस आन्दोलनका घटनालाई सजीव रुपमा चित्रण गरेको पनि उनले बताए ।
राष्टिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले संविधान, नाकाबन्दी र भूकम्पको सेरोफेरोमा आधारित रहेर लेखिएको पुस्तकले तेस्रो मधेस आन्दोलनका तथ्यपूर्ण विषयलाई उजिल्याएको बताइन् । कार्यक्रममा लेखक बस्नेतले आफूले अखबारमा रिपोर्टिङमा देखेका अनुभूतिलाई पुस्तकमा समेटेको जानकारी गराए । यो पुस्तक फाइनप्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो । ६०० रुपैयाँ मूल्य रहेको यो पुस्तक पुस्तकको मूल्य ५५५ रुपैयाँ मूल्य छ ।